Nxibelelana neNkxaso yeTekhnoloji
Iimpendulo kwimibuzo emininzi.
Ngaba ulahlekelwe sisitshixo selayisensi yakho ye-Mac okanye uWine oyithengileyo kwi-plumamazing.com?
Cofa apha ukuze uphinde uthumele nge-imeyile okanye usebenzise imenyu 'yokuNgena' kwimenyu ephezulu yasekunene.
Zange wafumana isitshixo sakho seLayisensi?
I-imeyile ngokuzenzekelayo kunye nerisithi kwidilesi ye-imeyile oyithengele isoftware. Unokuba uyichaze ngempazamo i-imeyile yakho. Okanye inokuba kwifolda yakho yogaxekile. Ukuba awuyifumani, ngena kwi-akhawunti yakho apha okanye Sithumelele i-imeyile kwintengiso.
Ndilahlekile okanye ndacima i-app endiyithengileyo kwiVenkile ye-App ye-Apple okanye kuGoogle Play, ndiyifaka njani kwakhona?
Phinda uyilayishe kwakhona usebenzisa iakhawunti efanayo / i-imeyile oyithengileyo ngayo. Ukufumana ulwazi oluthe kratya kwikhonkco ukuze ufunde ukuba ungayifaka kanjani kwakhona inkqubo oyithengileyo Ivenkile yeApple iTunes okanye kwi I Google Play Store.
Ndikubuza njani imibuzo yentengiso kwii -apps zakho endizifumene kwiVenkile yeApple yeApple okanye kuGoogle Play?
Yonke imibuzo yokuthengisa uthepha apha.
Ngaba unengxaki yenkxaso yetekhnoloji? Ngaphambi kokuthumela i-imeyile nceda ufunde oku ukugcina ixesha:
Okokuqala, ngaphambi kokunxibelelana nathi qiniseka ukuba unayo ingxelo yakutshanje yeapp. Yifumane PlumAmazing.com ukuba yi-Mac okanye i-Win app okanye iApple ye iOS okanye kuGoogle ukuba Android
Okwesibini, qiniseka ukuba ukhangele incwadana yesikhokelo yempendulo yombuzo wakho. Jonga incwadana yolwazi kwi-app okanye uluhlu olungezantsi.
iWatermark Pro Mac yKey (yayiyiKey) IAlarm encinci IncokoMaker
iWatermark iOS / Android Kopa uncamathisele I-PixelStick Uhlobo
iWatermark + iOS / Android Kubalulekile iClock I-OldWatermark Mac / Win
Ngaba isengozi yovavanyo okanye ayizukuqalisa? Ingxelo yengozi isinika imikhondo yobuchule kwingxaki ye-app. Ukufunda ukuthumela ingxelo ngengozi cofa apha.
Usenomcimbi? Ngokufutshane bhala iinkcukacha zengxaki kwaye uthathe skrini ukuze ucacise imibuzo okanye iingcebiso emva koko uthumele olo lwazi kuthi ngezantsi.
Ingxelo yakho, iibhugi kunye neengcebiso zibalulekile ekuncedeni iiapps zethu ukuba ziguquke. Enkosi!
IMac Win iOS Android omnye
Isoftware (Khetha enye)
nanye iWatermark + iWatermark Pro iWatermark iClock Kubalulekile yKey Umphathi wevolumu I-CopyPaste Pro CopyPaste (2022) IAlarm encinci I-TinyCal I-PixelStick IfotoShrinkr IncokoMaker
Inombolo yoHlelo lweApp
Inombolo yeguqulelo ye-OS
Ukhuphele kweliphi iVenkile
Ivenkile yePlum emangalisayoIvenkile yeWindows yeNkquboMac App StoreI Google Play Store
Ukubuza / ibug / Ingcebiso
Thumela ii-skrini okanye iifoto ukuba ziyanceda ukucacisa umba.